01:59 Annoucement No comments
ဒီဆိုဒ်ကိုဆက်မရေးဖြစ်တော့ပါ။ လာလည်တာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ HTTP://TECHINBLOGGING.BLOGSPOT.COM ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ကြော်ငြာအပ်ပါတယ်။ ခုလို လာဖတ်ပေးတာ အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gmail စာတစ်ခုကို အချိန်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးပို့စေလိုလျှင်
23:04 Gmail, Hacking No comments
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်အခု Gmail လှည့်ကွက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတင်ပါမယ်။ ဥပမာ - သင့်သူငယ်ချင်းမနက်ဖြန်မွေးနေ့ကို Gmail နဲ့ မနက်အတိအကျပို့ချင်တယ် ဒါပေမယ့် သင်က မအားဘူးဆိုရင် အချိန်အလိုအလျောက်ပို့ပေးမှာပါ။
အဆင်ပြေပါစေ။ သူက ကန့်သတ်ချက်ရှိလို့ သတိထားသုံးစေလိုပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်,YGNBlogger
08:25 Mobile Phones, ဗဟုသုတ, သတင်း No comments
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် YGNBlogger ပါ။ ယနေ့ Technological Villa ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် article ကိုပြောပြပါ့မယ်။ အဲ့ဒါတရုတ်ဟန်းဆက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဟန်းဆက်နဲ့နှိုင်းပြပါမယ်ဗျာ။ အောက်ပါအတိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖတ်ပါ။
၁။ ၃ မိနစ်အားသွင်း ပြီးလျှင် အားပြည့်ကြောင်း ပြခြင်း။
၄။ စာလုံးပေါင်း မှားနေခြင်း။ ဥပမာ - NokLa, blackderry, i-pom, samswag, j-phone
၇။ iPhone အစစ်မှာ Radio မပါခြင်း။ တရုတ်ဖုန်းမှာတော့ Radio နှင့်နှားကျပ် ပါခြင်း။
၈။ စာလုံးတွေအရမ်းကြီးနေပြီ။ ထုံးစံ Font size ဖြင့်မတူခြင်း။
၉။ iPhone 4S အစစ်မှာ ကိုယ်ပိုင် background image ပြောင်းလို့ရပြီး တရုတ်iPhone4Sမှာတော့ လုံးဝ ပြောင်းလို့မရခြင်း။
၁၀။ Handset ဟမ်းခြင်း(လေးခြင်း)။
၁၂။ Cover အစစ်သို့ တပ်လို့မရခြင်း။
၁၃။ Manual, Regulations တွေမပါခြင်း။
၁၄။ Functions နည်းပါးခြင်း။
၁၅။ Video ဖွင့်ရင် လေးလန်ခြင်း။
08:00 Dreamweaver, Tutorials, ဗဟုသုတ No comments
ကျွန်တော်လည်း ပိုစ့်ကရေးဖြစ်မရေးဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက Adobe Dreamweaver မှာ ဇယားကွက်ထည့်နည်းတင်ပါဆိုလို့ပါ။ Site လုပ်နည်းကတော့ ဒီပိုစ့်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက် မတင်တော့ပါဘူး။ Table ထည့်နည်း နှစ်မျိုးလုံးကို အခြေခံထားပြီးတင်မှာပါ။ ကျွန်တော် ဘာမှချဲ့ကားပြီးတင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက Tutorial တစ်ခုပါ။
ခင်ဗျားတို့မြင်တတ်ရင် လုပ်ရပိုမြန်ပါတယ်။ Header -None ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်က bold ကာလာမဖြစ်တော့ပါဘူး။ Left ဆိုရင် ဘယ်ဘက်မှာ ခေါင်းစဉ်ကမဲနေပါလိမ့်မ်ယ။ Top ဆိုရင် ထိပ်ဆိုးမှာ bold ဖြစ်မှာပါ။ both ဆိုရင် အပေါ်ကော၊ ဘယ်ဘက်မှာကော bold ကာလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Rows က ဘေးတိုက် ပါ၊ Columns က ဒေါင်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ဥာဏ်ရှိသလို သုံးသွားလို့ရပါတယ်။ Table width ကတော့ မပြင်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ Border thickness : 0ဆိုရင် ဘာ border မှမရှိတော့ပါဘူး။3လောက်ထားရင် border အသင့်သင့်လောက်ရပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ ။ ပြီးရင် OK ကိုကလစ်ပါ။
ကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ အဖြူအကွက်ကို ကလစ်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယအဆင့်တိုင်းပေါ့။
အဆင်ပြေပါစေ။ YGNBlogger ။ ကျွန်တော်က ခု gamer လုပ်တော့မှာမို့ ဒီဆိုဒ်ဖျက်သိမ်းတော့မှာပါ။
03:54 4Shared, Premium Link Generator No comments
ပိုစ့်မရေးတာ ၁လလောက်ရှိပါပြီ။ခုတော့ 4Shared Premium Link Generator လေးတစ်ခု ခုလေးတင် တွေ့ရှိထားတာပါ။ အားရင် တင်ပါဦးမယ်။ အားပေးပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော်ခုမှ စာမေးပွဲပြီးတာဆိုတော့ လုပ်သင့်တာတွေ အရင်ကထက်ပိုများနေပြီလေ။ ခုလည်း ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်နေတုန်းပါပဲ။ Click Here ကိုကလစ်ပါ။ Skip Ad လေးကို click ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ဝင်ချင်တဲ့ Premium Link Generator ရောက်လာပါပြီ။
Click here! (4Shared only)
ဖြစ်ချင်တာကို လိုချင်တာထက်ဖော်နေတဲ့ YGN Blogger....
00:36 သတင်း No comments
ကမ္ဘာကျော် Microsoft ကုမ္မဏီမှ မိုဘိုင်း ကုမ္မဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် Motorola အား မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားရာ
အမေရိကန် ဗဟို တရားရုံးမှ ယနေ့တွင် အပြီးသတ် အမိန့် ချမှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗွီဒီယို လျှို့ဝှက်စာဖြင့် ရေးခြင်း ၊ ၀ှက်စာဖော်ခြင်း အပါအ၀င် အမှု ၁၃မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည့် Motorola အနေဖြင့် သူ၏ ကွန်ပြူတာ ကုဒ်စနစ် လုပ်ဆောင်ပုံများ ၊
ပိုစ့်မရေးတာ ၂ပတ်နီးနီးရှိနေပါပြီ။ ခုတော့ Windows 8 ရဲ့ဆန်းကြယ်တဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ။ Windows7က Menu တွေရဲ့ပုံစံကို Windows 8 မှာပုံစံကူးမယ်။ လုပ်နည်းကတော့ Registry သုံးရုံပဲ။
ပုံစံအသစ်ကတော့ လှပေမယ့် တချို့ကိုင်လို့ နေသားမကျသေးတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်။ Windows7ပုံစံကို ထားချင်ရင် အလွယ်နည်းကတော့---
Start ကို ကလစ်ပါ။ ပြီးတော့ Search ကိုကလစ်ပါ။
Search Apps ကို ခင်ဗျားတို့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ Search box ထဲမှာ regedit လို့ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ regedit icon လေးကို ကလစ်ပါ။
ခဏစောင့်ပါ။ ပြီးတော့ ဒီလိုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ Yes လို့ပေးလိုက်ပါ။
Registry Editor ပွင့်လာပါပြီ။ မမြင်ဖူးလို့ဆိုပြီး တရေးမော့ကြည့်မနေနဲ့။ အောက်က ပြတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ အနီရောင်နဲ့ပြထားတယ်နော်။
အပေါ်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။
အပေRPEnabled ကို ကလစ်နှစ်ချက်ပေးပါ။
Edit DWORD (32-bit) Value ကြီးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ Value Data : ရဲ့အောက်မှာ 1 တွေ့မယ်။ မတွေ့လည်း အောက်ပုံတွေကို ကလစ်လိုက်။
1 ကိုဖျက်ပြီးတော့0လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ OK ကိုကလစ်ပြီး Registry Editor ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
အဆင်ပြေပြီထင်နေတာ။ အမှန်တော့ အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်။ ကိုးရို့ကားယားကြီးပဲ။ မပူပါနဲ့။ အဲ့ဒါကို ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းပြောမယ်။
လူပြိန်းနည်းပါပဲ။ Restart ချလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။ Windows7start menu နဲ့ လုံးဝတူသွားပါပြီ။
Windows7ကဟာလို အကောင်းပတိတိုင်း ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင်ပြေပါစေ။ ကျွန်တော်က တတ်လို့ ၊ တော်လို့မဟုတ်ပါ။ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
20:03 Blogger Widgets No comments
SEO ကို hack လုပ်တယ်ဆိုတာ.. ( Search Engine Optimization ) ပါ..။ မိမိ blog ကို.. Google မှာရှာရင်.. ထိပ်ဆုံးမှာရအောင်.. hack တာလေးပါ..။ ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ပါဘူး.. :)
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်... နည်းလမ်းတွေကတော့...အများကြီးရှိပါတယ်..။ အဲ့ထဲမှာမှ.. အလွယ်ဆုံးနည်းကို..ပြောပြမှာပါ...........
အရင်ဆုံးမလုပ်ခင်.. မိမိ blog မှာရှိတဲ့ Post titile တစ်ခုကိုရှာလိုက်ပါ.။ ဥပမာ - ညီမဆိုဒ်မှာဆိုရင်.. Word Press အလွယ်ရေးနည်းဆိုတဲ့... post ရှိတယ်..။ အဲ့ဒါကို.. google search box မှာ.. ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါမယ်..။ Hack မလုပ်ခင်ပေါ်လာတဲ့ Result အရဆိုရင်..ညီမဆိုဒ်က..အောက်နားမှာပဲရှိပါတယ်..။ Hack လုပ်ပြီးရင်..ခုနအတိုင်း google မှာပြန်ရှာကြည့်ပါ..။ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတာကို..တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. ^_^
- ပထမဦးဆုံး.. မိမိရဲ့ blogger account ကို log in ၀င်လိုက်ပါ..။
- ပြီးရင် template ကိုသွားပါ..။
- Edit HTML ကိုနှိပ်ပြီး.. Expand Widgets ကို အမှန်ခြစ်ခြစ်ပါ..။
- ပြီးရင် Ctrl+F နှိပ်ပြီး.. ဒီစာသားလေးကိုရှာလိုက်ပါ..။
- အဲ့ဒါလေးပေါ်လာရင်.. <h3 ကို <h2 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ..။ </h3> နေရာမှာလည်း.. </h2> လို့ပြောင်းလိုက်ပါ..။
- ပြီးရင် Save နှိပ်ပြီး.. Close လုပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါ..။
- အားလုံးပြီးရင်တော့..အပေါ်ကအတိုင်း..မိမိ blog မှာရှိတဲ့ post title တစ်ခုကို... Google မှာရှာကြည့်လိုက်ပါ..။ ထိပ်ဆုံးရောက်နေပါလိမ့်မယ်.. ^_^
P.S.: ကျွန်တော်ရေးဖို့မအားတဲ့အပြင် ခုတော့သူများဆီကပဲကူးဦးမယ်။ စာမေးပွဲရှိတယ်။ :(
SEO ကို hack လုပ်တယ်ဆိုတာ.. ( Search Engine Optimization ) ပါ..။ မိမိ blog ကို.. Google မှာရှာရင်.. ထိပ်ဆုံးမှာရအောင်.. hack တာလေးပါ....